musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Maldives Kuputsa Nhau » Shanyira Maldives neRubatsiro rweVaccination Webhusaiti
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Shanyira Maldives yakatanga mushandirapamwe unosimudzira zita rekuenda mumusika wepasirese uye kuvimbisa vafambi kuti iyo Maldives ndiyo imwe yenzvimbo dzakachengeteka dzekufamba napo panguva ino.
Iyo microsite nyowani inopa vafambi ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro penzira yekudzivirira ye COVID-19 sechimwe chikamu chakakura che "Ndabayiwa".
Iyo microsite inoratidza huwandu hwevashandi veindasitiri yekushanya vakabaiwa uye inopa ruzivo kune vashandi vekushanya nezve maitiro ekunyoreswa kwejekiseni uye nhungamiro dzeHPA.
Ichasanganisira inogadziridza kubva kumushandirapamwe, pamwe nekusimudzira mavhidhiyo, mifananidzo uye nyaya
Mushandirapamwe wekuti "Ndavharirwa" unovavarira kuona kuti veMaldives ndiyo nharaunda yekutanga yekubaiwa zvizere munyika. Pamwe pamwe neakasarudzika enzvimbo akaumbwa ezvitsuwa izvo zvinopa kuregedza kwemuviri, uye nhanho dzakasimba dzehutano nekuchengetedza zviripo, chikamu chakazara chakazara chekushanya chichava mukana wakawedzerwa mukukurudzira vashanyi kuti vashanyire kwavanoenda.
Pamusoro pezvo, mushandirapamwe uyu uchavimbisawo vafambi vanobva kumatunhu ese epasi kuyedza kukuru uye kudyara mari mukuona kuchengetedzeka kwevagari vemo uye vafambi vekunze munyika yeIndia Ocean.
Anokudzwa Mutungamiri Ibrahim Mohamed Solih akatanga chirongwa cheCOVID-19 Dhifaau musi wa Kukadzi 1, 2021, nechinangwa chekupa majekiseni eECOV-19 emahara kuvagari vese nevagari vemunyika. Kubva musi waChikumi 23, 2021, makumi mapfumbamwe neshanu muzana evashandi vepahotera vakagamuchira mushonga wekutanga wekudzivirira, nepo makumi manomwe kubva muzana yevashandi vemahara vakabaiwa zvakakwana.
Munguva yaApril 2021, Shanyira Maldives pamwe nekubatana neHurumende Yezvekushanya yakatanga chirongwa che "Ini Ndavharirwa" kugovana meseji yakanaka nezve kubayiwa kwevashandi vanoshanda mubazi rezvekushanya, pamwe nekusimudzira zvirongwa zviri kuitwa kuona kuti Maldives inoramba iri imwe yenzvimbo dzakachengeteka kune vafambi.